Ngokwemikhuba yokuphila kwabantu baseChina, imali esele emndenini njalo idinga ukufakwa ebhange. Yize inzalo ingekho phezulu, izizwa ikhululekile. Ucwaningo oluningi lwangaphambilini luye lwabonisa ukuthi inani lokonga izindlu laseChina liphezulu kakhulu kunamazwe amaningi kanye nezifunda zomhlaba.
Kodwa-ke, eminyakeni yamuva nje, lesi simo sishintshe buthule.
Engqungqutheleni Yezentuthuko yaseChina ebibanjelwe muva nje, u-Yi Huiman, onguSihlalo we-Industrial and Commercial Bank yezwe lami, uthe kusukela ngo-2010, izinga lokonga labahlali base-China liyaqhubeka nokwehla. Ngokombono wezinga lokukhula lokonga imali yasekhaya, ukwehla kuye kwaba kukhulu kakhulu eminyakeni yamuva. Kusuka ku-16% ngaphambi kuka-2010 kuya ku-7.7% ngo-2017, izinga lokukhula lehle laya kunani eliphansi kakhulu emlandweni.
Kungani abantu baseChina bezimisele ngokufaka imali emabhange?
Okokuqala, inzalo yasebhange icishe incane, futhi ukwehla kwamandla emali kubangele ukuthi amadiphozi anciphe ngokushesha okukhulu. Okwesibili ngukuthi ukuphathwa kwengcebo, umshuwalense nezimali nakho kudlulise imali yamadiphozithi awo wonke umuntu ebhange.Isilinganiso semali esikweletwayo semindeni siqhubekile nokukhuphuka, okungesinye isizathu esibalulekile sokukhula okungekuhle kwezinga lokonga izindlu. Wonke umuntu onemali uqala ukufuna amaphrojekthi afanelekile okutshalwa kuwo ukuze enze imali, ukuze imali ibe nenzuzo enkulu kunokufaka amabhange kunemikhiqizo yokuphathwa kwengcebo, futhi nabantu abaningi batshala imali kumaphrojekthi ezikweletini. Njengokubolekwa ukuthenga indlu, ukwenza ibhizinisi, nokutshala imali kumikhiqizo namaphrojekthi angcono.
Ngabe ibhange lakho lisabeka namanje? Ngabe ufuna ukuthola indlela engcono yokwenza imali? Uma kukhona iphrojekthi namuhla engenza ukuthi imali yakho yonke oyifakile utshalomali ifinyelele ngaphezu kuka-300%, ungathanda? Woza uthole ukuthi ukufanele yini.
Isekelwa ngokuqinile yizinqubomgomo zikazwelonke futhi ingumkhiqizo wamandla omusha futhi onakekela imvelo, ongenakho ukungcola futhi ongenakho ukungcola. Into ebaluleke kakhulu ukuthi imali engenayo yokutshala imali iphindwe izikhathi ezintathu noma ngaphezulu-isiteshi samandla esatshalaliswa se-photovoltaic.
Izitshalo zamandla ezisatshalaliswa ze-photovoltaic zinamaphrojekthi atshaliwe namuhla futhi azoqala ukuthola inzuzo kusasa, futhi izimbuyiselo zizinzile ngaphandle kwengozi. INational Development and Reform Commission ikhiphe uMbhalo onguNombolo 2196 ukucacisa ukuthi uxhaso olwabiwe olwenziwe nge-photovoltaic lwaluyi-0.37 yuan / kwh. Ngo-2013, iNational Development and Reform Commission yakhipha iDokhumenti No. 1638 ukucacisa ukuthi isikhathi soxhaso samandla we-photovoltaic isizukulwane sasineminyaka engama-20.
Impilo yesevisi ye-photovoltaics ingaphezu kweminyaka engama-25. Isiteshi sokuqala samandla ezweni lakithi sesineminyaka engama-35 sisetshenziswa futhi sisasetshenziswa ngokujwayelekile. Ngaphezu kwalokho, uhlelo aludingi ukunakekelwa.Ngezikhathi ezithile ukuhlanza uthuli ebusweni besiteshi samandla kungaqinisekisa ukukhiqizwa kwamandla okuphezulu. Kungashiwo ukuthi ngumshini wokuphrinta imali ongenza imali ngaphandle komsebenzi wezandla.
Okwamanje, uhlelo olusabalalisa ukusetshenziswa kakhulu lwe-photovoltaic is a project photovoltaic project projekthi eyakhiwe ophahleni lwezakhiwo zasemadolobheni.Ngakudala lapho ama-photovoltaics eqala ukungena emakethe entsha yamandla, abantu abaningi babengenathemba nge-photovoltaics, kepha manje i-photovoltaics kancane kancane iba yimakethe yamandla emisha Kusuka ezitshalweni zamandla kagesi ezisebenza ngemishini kuya ezitshalweni zamandla ezimboni nezentengiselwano ze-photovoltaic, amandla we-photovoltaic abe ngumkhuba wentuthuko ongagwemeki.
Kumele kube nenqubo yokuguqula nokwamukela izinto ezintsha.Ngokutshala imali kuma-photovoltaics, iqoqo lokuqala labantu abatshala imali ku-photovoltaics futhi babe ngabokuqala ukuzuza ingcebo.Amaqiniso akhombisile ukuthi ukuthuthukiswa kwamandla amasha kuyinto ejwayelekile, futhi i-photovoltaics manje nasesikhathini esizayo Ukukhetha okungenakugwemeka kwemakethe yamandla entsha.
Ukukhiqizwa kwamandla kagesi kwe-Photovoltaic kuhlukaniswe kabanzi kube izindlela ezimbili: ugesi wensalela ozisebenzelayo nokuzisebenzisela ukungena ku-inthanethi, nemali ephelele ukungena ku-inthanethi;
Okusizuzisa kakhulu kulezi zindlela ezimbili ukusetshenziswa kokuzenzakalela kukagesi osele ukuhlola i-Inthanethi.
1.Uxhaso lukazwelonke (i-0.37 yuan / degree)
2. Ugesi ozisebenzisela wona (u-0.52 yuan / kWh wezakhamizi, u-0.8 yuan / kWh wezimboni nezentengiselwano)
3. Amandla we-grid (0.37 yuan / kWh, sicela ubheke igridi kazwelonke yendawo ngemininingwane)
Imali yesibonelelo sikazwelonke + imali yokuzisebenzisela ugesi + imali yokuthengisa kagesi online = imali ephelele
Ukufinyelela okugcwele kwi-Intanethi: wonke ugesi owenziwa ukukhiqizwa kwamandla kagesi we-photovoltaic uthengiselwa igridi kazwelonke. Bona ithebula elingezansi ukuthola imininingwane:
Izitshalo zamandla ze-Photovoltaic azikwazi ukwenza imali kuphela, kodwa futhi zinezinzuzo eziningi.Isibonelo, ingapholisa indlu ehlobo; ingavikela nophahla ngempumelelo. Ukubalwa kwenzuzo yesiteshi samandla se-photovoltaic kuqala kusukela ngosuku esakhiwa ngalo futhi sixhunywe kwi-grid. Ngakho-ke, kufaneleke kakhulu kubahlali basemakhaya ukuthi bahlinzeke abantu abadala kanye nokuphathwa kwezezimali, futhi ifanele izimboni nezentengiselwano ukunciphisa izikweletu eziphezulu zikagesi. Ngokuvamile, izindleko zokutshala imali zizokhokhwa emuva eminyakeni engu-5-6, kanti isikhathi sokubuyisela sizofushane uma ukusetshenziswa kwamandla kagesi kwezentengiselwano kuphezulu. Iminyaka engama-20 esele yemali engenayo iyinzuzo engenacala, futhi inani lokubuya eliphelele lihlaba umxhwele kakhulu.
Izindawo ezifanelekile: Izakhamizi, uphahla lwezezimboni nezentengiselwano, nophahla lwendawo yomphakathi (njengezikole, izibhedlela, njll.) Bangafaka isicelo samalungelo empahla ezimele uma benelungelo lokuwasebenzisa. Iziteshi zamandla ezimboni nezentengiselwano azikwazi nje kuphela ukunciphisa inkinga yokungcoliswa kwendabuko kokukhiqizwa kwamandla kwamabhizinisi, kepha futhi zakha inani elengeziwe lamabhizinisi ngokugcinwa kwamandla nokuncishiswa kokungcola, okuwukutshala imali okungabizi kakhulu kumabhizinisi.